आभास: April 2015
मन म र मेरो दिमाग
थाहा छैन म के लेखौ . बास्तबमै थाहा छैन . मनले केहि कुरा लेख भनिरहेको छ निरन्तर तर यो दिमाग केहि सोच्नै चाहदैन . औलाहरु जबर्जस्ति लेख्न तयार त भए तर यो दिमाग आफ्नो अडानबाट हट्ने छेकछन्दै दिदैन. भन्छ " हेरौ मेरो साथ बिना त कसरि केहि गर्न सक्छस. बिचरा मन अनि मेहनत गर्न तत्पर भएका यी औलाहरु .
औलाहरु भन्दैछन " दिमागले साथ नदिई हामीले मात्र जबर्जस्ति गरेको कुरा कहिँ देखाउन लायक होला त ?" अनि फेरी मनले आशा जगौदै औलालाई सम्झाउदैछ " अरु कोइ नभएर के हुन्छ र मा छु नि साथ् दिने तिमीलाई सधै " अनि बास्तबमै फेरी सोच्न बाध्य भए म...
हो मेरो सबैभन्दा असल मित्र त येही मेरो मन हो . जब मलाई सबैले घात गर्छन अनि कसैले साथ् दिदैनन, तब म संग मेरो मन हुन्छ जसले मलाई सम्झाउछ अनि मलाई सबै भन्दा धेरै माया गर्छ .. जब म एक्लो हुन्छु ..जब यति लेखे तब मेरो मन भड्कियो अनि रिसाए जस्तो गर्यो . म अचम्म परे .. अनि मनले आसु झार्दै भन्यो " त साले किन एक्लो हुन्छु भन्छस हु म छैन तलै साथ् दिने ?" अब चाही मलाई अप्ठेरो पर्यो. अनि म केहि बोल्न सकिन मात्र मौन भए मात्र मौन .. मेरो बोलीलाई त मेरो दिमागले नियन्त्रणमा लिसकेको रहेछ पहिले नै ..
अनि बिचारा म अनि मेरो लाचार मन , बिबस औलाहरु .. मात्र मुस्कुराई रहेको थियो त मेरो दिमाग, मेरो केहि काम नलाग्ने दिमाग
By: Abhash Adhikari at Tuesday, April 21, 2015
म राजनीतिमा आउदैछु
हो म पागल नै हो । सबैलाई सहयोग गरौ भन्छु , सबैको राम्रो होस् भन्छु अनि सबै खुसी हुन् भन्ने सोच्छु । तेसैले म पागल नै हु ।
तर म अब पागल बन्न चाहन्न ।
यदि मैले मेरो लागि मात्र सोचेको भए म ठुलो मान्छे भैसक्थे । उहिले नै अरुलाई झुक्याउने छल्ने गरेको भए म कुनै पार्टीको नेता भैसक्थे । अनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि भैसक्थे होला तर बिचरा म कहिले कहिँ त आफ्नै पो माया लाग्छ !
अब चै राजनीती तिर लाग्नु परो भनेर यसो मान्छे ठग्न, छल्न, झुक्याउन खोज्यो तर मेरो खराब बानि आइनै हाल्छ राम्रो काम गर्दिनलाई । अनि के गर्नु मैले? बेकारमा सानो हुदा नेपाल स्काउटमा बसिएछ । यो स्काउट पनि हो के मलाई खराब बनाउने, राम्रो गर्न सिकाउने ! तेसैले त म अब मैले स्काउट पनि छोडिसके राजनीतिमा प्रवेश गर्न। कोहि हुनुहुन्छ मलाई राजनीति मा स्वागत गर्नलाई ? म आउदैछु !!!
By: Abhash Adhikari at Friday, April 17, 2015
(c) Abhash. Travel theme. Powered by Blogger.